Adduun dhan oo sixir ah oo aboor iyo dab-damis ah oo ku yaal Flutter Starlight | Androidsis
Ka ogow adduunka rogrogmada sixirka Flutter: Startlight
Manuel Ramirez | | Ciyaaraha Android, Tababarada
Kharibaadda: Startlight waa ciyaar si dhow ula xiriirta adduunka rogrogmada iyo cayayaanka. Dhawaan ayaa lagu daray mid ka mid ah cayaarahaas tayada leh ee Google badanaa ku calaamadeysato barnaamijkeeda Android iyo dukaanka ciyaarta fiidiyowga.
Waxaana ugu wacan sabab fudud: waxay noo geynaysaa ciyaar muusig ah taas oo aan ku siineyno ilo ku filan aboor, balanbaalis iyo cayayaan badan si aan u helno meel ay ku noolaadaan kuna koraan. Ciyaar bilaash ah oo mobilkaaga Android ka ah oo aan daaha ka rogayno si aad u ogaatid faahfaahintiisa.
1 Kharibaadaha: Bilowga iyo adduunkeeda rogrogmada
2 Cun xayawaanada kaynta
3 In kor loo qaado ubaxyada iyo aboorka
Kharibaadaha: Bilowga iyo adduunkeeda rogrogmada
Laga bilaabo daqiiqadda ugu horreysa ee aad bilowdo Flutter: Startlight ka dib markii aad soo degsato oo aad ku rakibto mobilkaaga, waxaad ku lug lahaan doontaa adduunyadaada xaragada ah taas oo lagu xusay balanbaal, aboor iyo cayayaan aan tiro lahayn. Tani waa mid ka mid ah astaamaheeda ugu horreeya ee lagu kala saaro kumanaan kulan oo laga helo Google Play Store.
Sababta ugu weyn ee jiritaanka Flutter: Startlight waa taas noqo "mid beerta ka shaqeeya" adduun dhan taas oo aad u oggolaan doonto in aboorku uu ka soo qaato manka ubaxyo kala duwan, ama uu ku soo jiito noocyada cusub qalabka wax lagu duubo; saldhigga safarkaagu ka bilaabmayo ciyaartan asalka ah.
Markaad u horseeddo aboor inuu u beddelo tallaalkiisii ​​ugu horreeyay una noqdo ukun, inuu noqdo diir ka dibna pupa, waxaad kudarsan doontaa noocyo cusub encyclopedia oo aad ogaan doontid. Waana inay iyagu noqon doonin oo kaliya sida aboor, laakiin noocyo badan oo noole ah oo dhammaantood xiriir la leh la'aanta laf-dhabarka jirkooda.
Cun xayawaanada kaynta
Waxa ugu fiican ee ku saabsan Flutter: Startlight waa taas wuxuu ina hor dhigayaa nooc kale oo mawduuc iyo ciyaar ah sida ciyaar dabacsan oo aan waqti kasta ku qaadan karno adduunka si aan u quudino xayawaanka keynta. Markaan quudinno, waan u dhaqaaqi karnaa iyaga si ay ugu gudbaan wejiga xiga ee isbeddelka.
Dabcan, waxaan ubaahan doonaa qadaadiic si aan udhameystirno dhamaan howlahaan, sidaa darteed waxaan Waxaan u qalamnaan doonnaa aboorka aan furi doonno uruurinta midhaha goosashada ama quudinta noocyada cusub ee jidka ku soo jira. Noocyadan cusub ayaa lagu dari doonaa encyclopedia oo noo oggolaan doona inaan ogaanno tirooyinka kala duwan ee aan u baahan nahay si aan u dhammaystirno nooc.
Hadba sida aboorku u badan yahay, ayaa lacag badan aynu helnaa oo markaa waxaan awoodi doonnaa inaan abuurno noocyo innagoo soo jiidanayna kuwo cusub oo ku jira weelka. Taasi waa, daqiiqado gudahood waxaad ku arki doontaa sida dhammaan noocyadaasi u koraan iyo Flutter: Startlight waxay qaadataa macno kale si ay u noqoto ciyaar gaar ah lafteeda.
In kor loo qaado ubaxyada iyo aboorka
Ubaxyadu waa u muhiim si manka badan loo soo saaro waana kari karnaa sii quudinta dhammaan noocyada cayayaankaas, gaar ahaan noocyada waaweyn ee balanbaalista leh ee Flutter: Startlight leeyahay.
Baalallayda aan ku hayno geedkeenna ayaa tiro ahaan u kori doonta, sidaa darteed xilligan aan leenahay labo nooc oo isku mid ah, waanu ku milmi karnaa si loo kordhiyo heerka ugu sarreeya. Tani waxay ina xasuusinaysaa ciyaaro kale oo badan oo aan ku kala beddeleyno nooleyaal kala duwan, sidaa darteed wax badan ama ka yar waxaad ka heli kartaa fikrad dhow oo ah waxa aad gacanta ku heysato Flutter: Startlight.
Qeybta farsamada runta taas dhan walba, sida sawirada, codka ama waxqabadka, wuxuu u shaqeeyaa si aad ufiican, sidaa darteed wax kale oo aan ahayn inaan u rajeeyo nasiibka ugu fiican adduunka kooxdan horumarineed ee mas'uulka ka ah Flutter: Startlight. Ciyaar isku dayaysa waxyaabo kale taasna waxay leedahay bartaas gaarka ah ee loogu talagalay muusigga iyo habeenkaas xasaasiga ah ee aboorka, iyo waxa uu noqon doono dab-damisku, si nabad ah ugu nool yihiin.
Khariban: Startlight waa ciyaar weyn taasina waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku raaxeysato waxa ku jira maalmo badan. Waxay awood u leedahay inay nagu qabato isbedelka ugu horeeya iyada oo dhawaaqeeda iyo nabadaas oo degta mid kasta oo ka mid ah goobaheeda. Waxaad ku haysataa bilaash Google Play Store.
Miyuu leeyahay xoogaa sixir ah
Saacado badan oo ku-xigeen ah
Ma ahan gabi ahaanba asal ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ka ogow adduunka rogrogmada sixirka Flutter: Startlight
Sida loo isticmaalo Waze halkii laga isticmaali lahaa Khariidadaha Google ee leh 'Auto Auto'
Nubia Z18 ayaa ka muuqda Geekbench oo ay weheliso astaamaheeda muhiimka ah